‘ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिएका छौं’ « Loktantrapost
‘ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिएका छौं’
१९ माघ २०७४, शुक्रबार ११:०२
स्वर्ण महोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो हुँदैछ ?
२०२४ सालमा स्थापना भएको विद्यालय ५० वर्षको यात्रामा छ । यो हाम्रो लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ तथा विद्यालयसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैका लागि ठूलो अवसर पनि हो । जुन हामीले एक जुगमा एकपटक पाउँछौँ । यसलाई भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न गर्नका लागि हामी लागि परेका छौँ । माघ १६ गते उद्घाटन भएको महोत्सव माघ २६ गते सम्पन्न हुनेछ । अहिलेसम्म हामीले प्रमुख अतिथि, अतिथि, छिमेकी विद्यालय तथा सरोकारवाला सम्पूर्णलाई पत्रचार गर्ने काम गरेका छौँ । आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ । स्वर्ण महोत्सव स्तम्भको तयारी पूरा भएको छ भने विद्यालयको इतिहास समेटेको स्मारिका छापाखानामा पुर्याएका छौँ । तर, हामीले उक्त स्मारिकाको नमूना मात्र ल्याएर विमोचन गर्ने तयारीमा छौँ । बाँकी स्मारिकामा यस महोत्सवमा भएका गतिविधिलाई समेत समेट्ने जमर्काे गरेका छौँ । त्यसपछि मात्र स्मारिकाको पूर्णरुप हुनेछ ।
महोत्सवमा विद्यार्थी सहभागिता गराउनका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु बनाउनु भएको छ ?
मैले अघि पनि भनेको छु । यो महोत्सव हामी सबैका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । त्यसमा पनि विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्तिमा महोत्सव मनाउँदै गर्दा यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी कुनै न कुनै इभेन्टस्मा सहभागी होस् भन्ने उद्देश्यले माघ १६ गतेदेखि नै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरेका छौँ । जसमा धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीको सहभागिता हुनेछ । हाम्रो लक्ष्य नै छ, एक विद्यार्थी एक इभेन्टस् । जसमा विजेता हुने विद्यार्थीले पुरस्कार पाउने छ । उसका लागि यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ । जसमा १७ देखि माघ २१ सम्म आन्तरिक खेलकुदको आयोजना हुँदैछ । साथमा साँस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।
छिमेकी विद्यालयलाई कसरी सहभागी गराउँदै हुनुहुन्छ ?
यस महोत्सवमा छिमेकी विद्यालयको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले २ वटा इभेन्टस् मेचीनगरस्तरीय राखेका छौँ । जसमा माघ २३ गते अन्तर मावि हाजिरीजवाफ र माघ २६ गते अन्तरमावि साँस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता रहेका छन् । हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता बाल क्लबको आयोजनामा हुनेछ ।
महोत्सवका लागि कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नु भएको छ ?
हामीले सकेसम्म कम खर्चमा महोत्सव सक्ने योजना बनाएका छौँ । त्यसमा स्वर्ण महोत्सव स्मारकका लागि लाग्ने करिब २ लाख रुपैयाँ स्थानीय दाता सरद सिवाकोटीले निर्माण गरिदिनु भएको छ । त्यसपछिका स्मारिका प्रकाशन र अन्य कार्यक्रमका लागि करिब ६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा स्मारिका प्रकाशनका लागि पूर्व विद्यार्थी समाजको सहयोग रहेको छ भने शुभकामना तथा विज्ञापनबाट केही रकम जुटेको छ । त्यसैले खर्चलाई सकेसम्म कम गर्ने योजनामा छौँ ।